म 31 बर्षको विवाहित पुरुष हु । मेरो विगत ६ महिनादेखि नियमित शारिरिक सम्पर्क हुदा समेत conception हुन सकेन । श्रीमतीको रगत परीक्षणमा TSH 5.92 देखियो भने मेरो sperm count मा9million/ml र mobility 30% मात्र देखियो भने pus cell 2-4 hpf देखियो । यस्तो अवस्थामा बच्चा पाउन म सक्षम हुन के गर्नुपर्छ ? | Hamro Doctor
म 31 बर्षको विवाहित पुरुष हु । मेरो विगत ६ महिनादेखि नियमित शारिरिक सम्पर्क हुदा समेत conception हुन सकेन । श्रीमतीको रगत परीक्षणमा TSH 5.92 देखियो भने मेरो sperm count मा9million/ml र mobility 30% मात्र देखियो भने pus cell 2-4 hpf देखियो । यस्तो अवस्थामा बच्चा पाउन म सक्षम हुन के गर्नुपर्छ ?
on Tue, Apr 23 2019 03:24 PM
निरन्तर शारीरिक सम्पर्क पछि पनि बच्चा नजन्मिनु कारण धेरै हुन्छन । एकपटक दुबैजनाको विस्तृत परिक्षण गरेर मात्र यकिन भन्न सकिन्क्छ । त्यसको निम्ति एकपटक स्त्रीरोग विशेषज्ञसंग परामर्श गर्नुहोला। हाम्रोडक्टर मार्फत स्त्रीरोग विशेषज्ञसंग अनलाइन परामर्श गर्नको निम्ति यो लिन्कमा जानुहोला। https://www.hamrodoctor.com/service/obstetrics-and-gynecology
on Wed, Apr 24 2019 10:52 AM
please consult online with expert doctors for better solution https://www.hamrodoctor.com/doctor/dr-anil-kumar-bhatta
on Tue, Apr 23 2019 04:38 PM